Qarax Ismiindaamin ah oo ka Dhacay Guriga Cali Geedi iyo Ciidamada AMISOM oo gurigiisa ka ka xeeyey meel nabdoona ku haya...
Xilli uu Cali Maxamed Geedi ku sugnaa gurigiisa oo ku yaal degmada C/Casiis ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lala beegsaday qarax loo malaynayo ismiidaamin oo..
Axad, June 3, 2007
Gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa loo adeegsaday isku day la doonayey in lagu khaarijiyo Raiisal wasaaraha DFKMG, Cali Maxamed Geedi.
Qaraxaan ayaa dhacay ka dib markii gaari qooqan ah uu istaajiyey ilaaliyihii guriga raiisal wasaaraha DFKMG cali maxamed geedi iyada oo uu sababay dhimasho ilaa 7 qof ah dhaawacune tiro intaa ka badan.
Cali Maxamed Geedi ayaa ku sugnaa gurigiisa marka uu qaraxu dhacayey balse waxaa ay xaqiijiyeen ciidamada AMISOM ka socda dalka Ugaandha in ay raiisal wasaaraha DFKMG u kaxeeyeen meel nabad ah isaga oo bedqaba, waa sida ay sheegeene, waxaa kale oo ay Sheegeen ciidamada AU in aysan soo gaarin wax dhimasho ah ama dhaawac ah oo ka tirsan xubnaha dowlada DFKMG.
Waa markii sadaxaad oo la la beegsado qarax sidaan oo kale ah balse uu ka badbaaday Geedi.
Waxaa mar qura indhaheyga qariyay busta iyo qiiqa uu qaraxan dhaliyay oo xafiiska aan ku leeyahay meel aan ka fogeyn xafiiska Ra�iisul Wasaaraha DFKMG, iyadoo goobta qaraxa uu ka dhacay ay tahay iridka hore ee Ra�iisul Wasaaraha.
Qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa 15 daqiiqo ka hor intii aanan qoraalkan uu ka dhacay afka hore halka laga galo hoyga uu ka degan yahay Ra�iisul Wasaaraha DFKMG ee degmada C/Casiis ee magaalada Muqdisho iyadoo qaraxan aan la ogeyn waxa uu ahaa.
Wixii ku soo kordha ee qaraxan uu geystay iyo sababta wararkeena danbe ayaad kala socon doontaan.
Warar: June 2, 2007
Taliyihii Nabadsugidda Kismaayo oo Xalay La Diley
Guddoomiyihii Degmada Hawl-Wadaag oo Xalay La Diley
Weerar Xalay lala Beegsaday Ciidamada Itoobiya
Dagaal Kharaar oo ka dhacay Buuhoodle.
Ciidamada Xukuumada Ethiopia Oo Baaritaan Ka Sameeyey Xaafado Kamida Caasimada Muqdisho.
Vedio: Ciidamadii Soomaaliya ee Cadowg Dhabarjabka u geysan jirey
Xalay oo Sabti soo geleysey fiidkii waxaa magaalada Kismaayo lagu diley Taliyihii Nabadsugidda Kismaayo, Makhtal Faarax, waxaana wararku tibaaxeen in ay toogteen saddex nin oo aan haybtooda la aqoon.
Arbacadii lasoo dhaafay ayey ahayd markii Muqdisho lagu diley taliyihii nabadsugidda Degmada Xamar weyne.
Xalay oo Sabti soo geleysey waxaa magaalada Muqdisho lagu diley Guddoomiyihii Degmada Hawl-wadaag, Xasan Farey, waxaana dilkaas geystey dabley aan haybtooda la garanayn, kuwaas oo meeshii ka fakaday.
Xalay fiidkii waxaa weerar lala beegsaday goob ay ciidamada Itoobiya kaga sugan yihiin degmada Yaaqshiid. Waxaana weerarkaas ka bacdi ay ciidamada Itoobiya fureen rasaas xooggan. Ilaa hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhacay halkaas.
Telefishanka Maraykanka ee CNN ayaa sheegay in Jimcadii uu Maraykanku duqeeyey meel ka tirsan Woqooyiga Bari ee Soomaaliya (Aagga Baargaal), waxana uu sheegay in weerarkaas lagu qaaday wax looga shakisan yahay Al-Qaeda, waa sida warku u dhigay'e. Telefishanku waxa uu soo xigtey ilo aan la cayimin, kuwaas oo sheegay in aan la aqoon khasaaradii uu weerarkaasi geystey.
Waxaa Jimcadii dagaal sababay dhimasho ugu yaraan 10 ruux iyo dhaawac tira badan uu ku dhexmaray labo maleeshiyo beelood oo hadda ka hor ku dagaalamay degaanka Aangalo ee Gobolka Ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, labadaan reer ayaa lagu kala magacaabay Tayaag iyo Reer Hagar .
Nin ku sugan degmada Buuhoodle oo somalitalk.com u waramay ayaa sheegay in dagaalkaan Jimcadii oo ku sii fiday halka loo yaqaan Quraca Buuhoodle oo meel banaan ah layska helay uu khasaare ba'an geystay oo in ka badan 10 ruux ay ka dhinteen labadii dhinac ee dagaalku dhexmaray midkood.
Waxaa hadda soo kala dhexgalay labada dhinac ee dagaalamaya, maamulka iyo odayaasha degaanka, inkastoo, Buuhoodle ay tahay meel qeybsan oo ay ku sugan yihiin dad kala taageeersan labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland taas oo xoojinaysa xamaasada dagaalka, Maamulka Puntland ayaan wali ka hadlin waxa Buuhoodle ka dhacaya, balse hadda waxaa gurmad xoog leh ku jira duqayda iyo waxgaradka gobolada laysku yiraahdo SSC(Sool, Sanaag iyo Cayn).
Garoowe | mcbille@gmail.com
Ciidamada xukuumada Ethiopia ayaa Jimcadii waaberigii Dhaq dhaqaayo baaritaan ka bilaabay xaafado kala duwan oo kamida caasimada muqdisho islamrkaana buux dhaafiyay Xaafadda Towfiiq ee degmada Yaaqshid halkaasi oo ay ka bilaabeen howlgal ay guryaha ku baarayaan.
Dadka deegaanka xaafada Towfiiq ayaa sJimcadii ku waabariistay iyadoo Ciidamo Ethiopian ahi ay ku gadaaman yihiin guryahooda ,islamrkaana dhamaan dadka degan xaafadahaasi ku amray in aysan kasoo bixin guryahooda.
Sidoo kale Ciidamadan Ethiopianka ah ayaa galay guriga sheikh yaxye oo kamid ahaa culimada golaha maxaakiimta islaamka soomaaliyeed islamrkaana ku shahiiday dagaaladii Muqdisho, waxaana la sheegay in ay gurigaasi baaritaan xoogan ka sameeyeen.
Ciidamada ethiopianka ayaa galay sidoo kale guryaha dadka rayidka ee deegaankasi islamrkaana baaritaano ku aadan hubka iyo xijaabka ay haweenku dar alle u qaateen ka baarayey iyagoo sidoo kale cagta marinayey wax alla waxii ay arkaan oo ay galeen guryo ay uga shakisnaayeen in lagu aasay hub.
Si kastaba ha ahaatee tan iyo xiligii ay istaageen dagaaladii u dhexeeyey xoogaga diidan joogitaanka ciidamada shisheeyey ee dalka ku sugan ayaa ciidamada xukuumada Ethioipia u muuqanayaan kuwo aargoosi ka wada gudaha caasimada muqdisho islamrkaana isha ku haya dadka muslimiinta ah iyo weliba haweenka xijaaban.
Faafin: SomaliTalk.com | June 2, 2007
Ganacsato Ay Sirdoonka Ciidamada Ethiopia Kala Bexeen Guryahooda
.Daahir Riyaale oo 20sano xarig ah ugu bedeley 2-nin oo ku..
.London: Mudaaharaad goobta ay ku Shirayaan Contact Group
.DFKMG:100-ka Dumarka kama qayb geli doonaan Shirka Italy
.Z�rich: Kulankii 57 ee ururka Ciyaaraha Kubada Cagta (FiFa)
Wararka oo dhan ka akhri halkan.... June 1
Guddigii Culuma-u-diinka ee loo xilsaaray xalintii xurguftii beelaha Cali Jibraahiil iyo Dishishe oo soo dhamaystiray khilaafkii labada beelood.. Akhri... June 1
Bayaan ka soo baxey Shirka Digil iyo Mirifle ee Columbus Ohio Waqooyiga Mareykanka... Akhri.. June 1
Binti Jaylaani oo Australia Looga Helay Dhakhtar Lagu Daweynayo
GAROOWE : Ka Qaybqaado Dhismaha Masaajidka AL-hudda
Maku hadashaa Afka Ethiopianka: Dhegeyso halkan
Waa waraysi lala yeeshay Tamagne Beyene iyo Neway Debebe oo caan ka ah Itoobiya oo ka hadlaya xukun xumida TPLF, doorashadii May 2005 ee la musuqmaasuqay iyo dilka dadka aan waxba galabsan Dhegeysi
Qoysas Badan Oo Kusoo Noqday Muqdisho Oo Mar Kale Ka Barkacaya Agagaarka Wersheda Baastada Ee Muqdisho.
Maxamed Dheere oo Ururada Rayadka ah ku eedeeyey in ka dambeeyaan Qaraxyada Muqdisho
Meles Zenawi oo Sheegay in uu Xukunka ka Degi Doona Laba Sano Gudahood
.Tacshiirad Lagu Furay Ciidamada DFKMG aaga Black Sea
.Gudoomiyihii maxkamada baladweyne oo lagu diley Muqdisho
.Wafdi ka socda DFKMG oo ku sugan dalka Liibiya...
Wararka oo dhan ka akhri halkan.... May 30
Habeenka Waxbarashada Soomaalida Minnesota
.Warbixin: Borl�nge iyo Somalitalk.com II